जो किनारा लागेर पनि फर्किए - Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
भारतीय मन्त्रीलाई यो कुन तरिकाको ढोगाइ हो मन्त्रीज्यू ?... January 17, 2021
नरेश फुयाँल ः
नेपाली उखान छ, सुखमा नमात्तिनू र दुःखमा नआतिनू । तर, उखानले निर्देश गरेअनुसार सधैँ जिन्दगी किन चल्थ्यो र ? जिन्दगीमा प्राप्त सुख सुविधाले कहिले मान्छेलाई अन्धो बनाइदिन्छ । फलतः प्राप्त उपलब्धी नै संकटमा पर्छ । यस्तो अवस्था धेरै व्यक्तिमा आउँछ । चाहे समान्य व्यक्ति होस् अथवा सेलिब्रिटीहरू ।
नेपालमा पनि यस्ता केही कलाकार छन् जो सफलताको उच्चतम् बिन्दूमा पुगेर किनारा लागे । तर, फेरि आफ्नो पुरानै जिन्दगीमा फर्किने प्रयास गरे । नायिका नम्रता श्रेष्ठ सञ्चारकर्मीबाट रजतपटमा डेब्यू गरिन् । चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश उनलाई फाप्यो । ‘सानो संसार’, ‘मेरो एउटा साथी छ’, ‘फष्ट लभ’ले उनलाई नायिकामा स्थापित् ग¥यो ।
१ दशक अगाडि ‘मेरो एउटा साथी छ’ प्रदर्शन भइरहेका बेला नम्रता र डिजे तान्त्रिकबीचको सहवास भिडियो सार्वजनिक भयो । उक्त भिडियोले उनको उकालो लागिरहेको ‘करिअर’ संकटमा पर्यो । धेरैले उनको आलोचना गरे । डिप्रेसनको लेबलमा पुगेकी उनलाई कतिले हौसला प्रदान गरे । अधिकांशले नम्रताको करिअर सकियो भनिरहेका बेला विस्तारै उनले ‘कमब्याक’ गरिन् । नम्रता अहिले नेपाली रजतपटमा पहिलो रोजाइकी नायिका हुन् । महंगो पारिश्रमिक लिने नायिकामा उनी पनि एक हुन् ।
गायक सुगम पोखरेलले पप संगीतमा स्रोताको मन जितिरहेका थिए । ‘फेरि त्यो दिन सम्झन चहान्न’ बाट उनले आम संगीतप्रमी नेपालीको मन जिते । पप गायनमा मात्रै होइन पाश्र्व गायनमा पनि उनको माग बढ्यो । तर, विडम्बना ६ वर्ष अगाडि एक्कासी सुगम पोखरेल पक्राउ परेको खबर आयो । खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका सातजनासँगै रहेका पोखरेललाई शंकाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले बयान लियो ।
गायनमा धेरैले आदर्श मानेका सुगम पक्राउ परेपछि धेरैले अड्कलबाजी गरे अब उनको सांगीतिक ‘करिअर’ धरापमा पर्यो । तर, विस्तारै उनी सांगीतिक जीवनमा फर्किए । जति सुमधुर उनको स्वर छ त्यति नै मधुर संगीत भर्ने सुगम अहिले चलचित्रमा पाश्र्व गायनमा रोजाइका गायक तथा संगीतकार हुन् ।
पप गायक अनिल सिंह पनि प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउन नसक्ने सेलिब्रिटी हुन् । ‘आई लभ यु’, ‘विल यु म्यारी मि’, ‘प्रेम पत्र’, ‘डुब्न देउ मलाई’ जस्ता दर्जनौं गीतबाट युवा पुस्ताको मन जितेका उनी केही वर्ष ड्रग्स’ को कुलतमा फसे । कुलतमा फसेसँगै भूमिगत प्रायः भएका अनिल अहिले आफूलाई पुरानै जिन्दगीमा फर्किने प्रयासमा छन् । गीतसंगीतको यात्रा पुनः तय गरेका छन् । युट्युब च्यानलमार्फत अनिल सिंगल ट्रयाक लिएर आफ्ना दर्शक तथा स्रोता माझ आइरहेका छन् । यद्यपि उनको सांगीतिक यात्राले पहिलाकै लय समाउन सकेको छैन ।
स्वेता खड्का श्रीकृष्ण श्रेष्ठको हात समातेर नेपाली चलचित्र उद्योगमा भित्रिइन् । ‘कहाँ भेटिएला’, ‘श्रीमान् श्रीमती’ चलचित्रमा अभिनय गरेकी स्वेताले नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरिन् । बोन क्यान्सर भएका श्रीकृष्णको मृत्यु भयो । विवाह गरेको एक महिनामै श्रीकृष्णको निधन भयो । उनको निधन भएको केही दिनमै प्रदशर्नमा आएको चलचित्र ‘कोहिनुर’ ले बक्स अफिसमा सबैभन्दा धेरै ग्रस कलेक्सन गर्ने चलचित्रको इतिहास बनायो । तर, विवाह गरेको १ महिनामै श्रीमान्को निधन भएपछि स्वेताले नेपाली चलचित्र उद्योगमा फर्केलिन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास् थिएन । यद्यपि केही वर्षको अन्तरालपछि उनी चलचित्र ‘कान्छी’ लिएर आइन् । यसमा स्वेता नायिका मात्रै थिइनन् निर्मात्री पनि थिइन् ।
चलचित्र र सांगीतिक उद्योगमा चाहेर र होस् वा परिबन्धमा परेर होस् पाएको सफलतालाई जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने थुप्रै छन् । यस्तै मध्येकी गायिका अञ्जु पन्त पनि हुन् । पारिवारिक जीवन सहजै अगाडि नबढेपछि तनावमा रहेकी अञ्जुको स्वरले साथ दिन नसक्दा उनले सांगीतिक यात्रालाई केही वर्ष विश्राम दिनु र्पयो । स्वर फर्किएपछि अञ्जु पनि सांगीतिक जीवनमा फर्किइन् । स्रोताले उनको पुनरागमनलाई सहजै स्वीकार गरे ।